Maxay Tahay Inaad Ku Socoto Si Aad Ujebiso Yoolalkaaga Beddelka | Martech Zone
Maalmahan, ku dhowaad dhammaan Analytics qalabka meesha yaala ha kuu daayaan cdhacdooyinka leefleefka. Gujintu waxay matalayaan inta badan isdhexgalka uu isticmaaleha la leeyahay bartaada. Laakiin marka aad hesho xogtaas, hadda waa maxay? Waad raad raaci kartaa guji kasta oo booqde sameeya, laakiin taasi waa daadad xog ah oo lagu kala shaandheyn karo. Guji raadinta, markaad si sax ah u dalbato, waxay noqon kartaa mid ka mid ah aaladaha ugu awooda badan ee lagu fahmo sida saxda ah ee dadku uga jawaabaan waxa ku jira iyo sida ay suuq geyntaadu u saameyneyso qafiskaaga.
Qoraalkan waxaan ku dhejin doonaa lix tilmaamood oo fudud oo kaa caawinaya gujinta raadinta. Hadafkeygu waa inaan kaa caawiyo inaad soo ururiso xog wax ku ool ah si aad u fahamto qiimaha bartaada iyo inaad fahamto suurtagalnimada noocyada kala duwan ee hagaajinta goobta.
1. Wax walba ha raacin
Dhammaan qasabku maahan kuwo loo siman yahay. Kaliya qayb yar oo ka mid ah guud ahaan UI-gaaga ayaa runtii lagama maarmaan u ah in lala socdo. Haddii ficilku aanu muujinayn xiisaha ka sarreeya celceliska-meheraddaada, waa uun buuq. Kuuma siin doono wax aragti ah hab-dhaqanka martidaada ugu sareysa. Guji badhanka, baasinimada iyo xiriiriyeyaasha qoraalka ku jira ayaa dhif ah in lala socdo, marka laga reebo xaaladaha dhifka ah
2. Lasoco isdhexgal macno leh
Raadi waxyaabo aad rabto macaamiisha mustaqbalka inay sameeyaan. Marka laga hadlayo ganacsiga elektaroonigga ah, waa kan Add to Cart isku xidhka iyo Baadhid badhanka, iyo bogagga qaarkood oo ku teedsan dariiqa muhiimka u ah kuwaas. A Codso Quote a foom ama foomka xiriirka ee loo adeegsado jiilka hoggaaminta labaduba waa musharixiin wanaagsan. Marka laga hadlayo adeegga khadka tooska ah ama arjiga SAAS, isku xirka boggaaga qiimeynta ayaa ah meel wanaagsan oo laga bilaabi karo.
3. Ka fikir talaabooyinka meertada nolosha macaamiishaada
Lasoco walxaha tilmaamaya ka-gudubka hal marxalad nololeed una gudbayo tan xigta. Waa tan tusaale e-commerce:
Helida - Soo-booqdehu wuxuu yimaaddaa boggaaga raadinta ka dib ama guji xiriiriye bog kale. Raad qasabno ku Baadh alaabta Badhanka.
Pre-Iibsasho / Saxiix - Qofku wuxuu ku adeeganayaa meherad ama ku hawlan yahay adeeggaaga. Raad qasabno ku Saxiix or Create Account Badhanka.
Engagement - Qofku wuxuu ku soo noqdaa inuu isticmaalo bartaada. Raad qasabno ku Add to Cart Badhanka.
Iibsasho / Beddelid - Qofku wax buu iibsadaa ama wuu buuxiyaa foomka jiilka hoggaaminta. Raad qasabno ku Baadhid Badhanka.
Referral - Qofku wuxuu kula wadaagayaa boggaaga baraha bulshada ama wuxuu ku martiqaadayaa kuwa kale. Raad qasabno ku Facebook Like widget.
Dabcan, nidaamka kor ku xusan wuu ka duwanaan doonaa ganacsiga ilaa ganacsiga, laakiin waxaad heleysaa fikradda.
4. Isticmaal nidaam qiimeyn fudud
Qeyb kasta oo UI ah oo aad raadineyso waa inay lahaato dhibco. Waxay noqon kartaa sida ugu fudud ee 1 ilaa 10, ama boqolkiiba. Nooca nidaamka qiimeynta ee aad isticmaasho runti dhib malahan, illaa inta ay iswaafaqsan tahay. Kaliya u isticmaal qiimee sida ay muhiimka u tahay isdhexgalka. Farsamadan ayaa kugu qasbeysa inaad mudnaanta siiso falalka isticmaalaha, taas oo gacan ka geysaneysa sameynta warbixinno macno leh. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa warbixin ku tusaysa dhammaan dadka sameeyay 3 ama wax ka badan dhibco dhan 95/100.
5. U kala saar dhacdooyinkaaga gujinaya adigoo adeegsanaya heshiisyada magac bixinta macno leh
Kahor intaadan ku dhicin faahfaahinta, marka hore tixgeli noocyada cunsur ee qof kula falgeli karo bartaada. Qeyb guud waa fiidiyowyo. Si kastaba ha noqotee, haddii aad dhowr nooc oo fiidiyowyo ah ku haysato bartaada, waxaad u baahan kartaa inaad si gaar ah ula socoto qaybaha fiidiyowgaaga.
Tusaale ahaan, aan dhahno booqdayaashu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay wax badan ka bartaan wax soo saarkaaga iyagoo daawanaya fiidiyowyada iibka, sidoo kale waxay booqan karaan qayb kale oo loogu talagalay fiidiyoowga tababarka. Kuwani waa laba qaybood oo aad u kala duwan. Si aad u kala soocdo, waxaad horudhac u noqon kartaa dhacdooyinkaaga guji Video - Iibinta, maxaa yeelay waxaad rabtaa rajo inaad gujiso fiidiyowyadan. Qaybta labaad ee loogu talagalay Video - Tababar waxay u badan tahay inay beegsadaan macaamiisha hadda jira ee xiiseynaya inay wax badan bartaan.
6. Isticmaal riix riix si aad ula socoto untrackable
Ku saabsan Trialfire
Koodhbeynta sheybaar ama bog waxay ku noqon kartaa wax cabsi geliya celcelis ahaan suuqleyda. La shaqaynta kooxdaada horumarinta iyo wakaaladu waxay noqon kartaa waqti-qaadasho ama xitaa aan macquul ahayn in lagu sameeyo isbeddelada lagama maarmaanka u ah istiraatiijiyadda raadraacaaga. Tijaabinta waa tifaftire muuqaal ah oo loogu talagalay dejinta webka Analytics. Trialfire wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhex mariso bartaada internetka sida booqde joogta ah, laakiin guji kasta oo aad sameyso wuxuu ku siinayaa awood aad ku darto 'pin pin'. Waad ku dari kartaa biin dabagal wax kasta, oo ay ku jiraan xiriiriyeyaasha, badhanka, iyo meelaha.
Tags: raadinta helitaankaku dar gaadhigaAnalyticsraadinta dhacdo falanqayntaBaadhidraadraaca dhacdoarjiga raadinta dhacdadadhacdo la socodka user interfaceraadinta kahor iibsigaraadinta gudbintacodso xigashosaxeex raad raac